KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): To All KAREN around the world!!!! Attention Please..
To All KAREN around the world!!!! Attention Please..
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ကရင်အမျိူးသားများသို့ 
All KAREN around the world!!!! Attention Please........
အရေးပေါ်အကူအညီအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကရင်အမျိူးသားများ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 8:43 AM